|||: July 2007
သူမှာ စူးရဲတောက်ပ ပြီးအရာရာကို စူးစမ်းလိုတဲ့ မျက်လုံးတစ်စုံရှိတယ်။
သူ့မှာ ရှည်လျားနက်မှောင်တဲ့ အမြီးရယ်။ အဖြူ၊အနက် ကွက်တဲ့အရောင်လည်းရှိတယ်။
သူက မြေပြင်ပေါ်မှာ လေးဘက်ထောက်သွားရတာကို ကြိုက်တယ်။
သူ့အသံ ကသေးသေးလေး (ငယ်ငယ်တုန်းက အအေးမိလွန်လို့နဲ့တူရဲ့)
သူက သူ့သဘာဝနဲ့ဆန်ကျင် ရေတွေနဲ့ဆော့ကစားရတာကိုလည်း ပျော်မြူးတယ်။
သူက စားချိန်တန်ရင်စားတယ် (တစ်ခါတစ်လေ အမေကအလိုလိုက်ပြီးတောင် ထမင်းချိုင့်ကို ကုတင်ပေါ်အထိ ပို့ပေးရတယ်)
သူ ကစားချိန်တန်ရင် တစ်အိမ်လုံးကို ဗြောင်းဆန်လို့။
နောက်ကျတော့ ခဏအိပ်ဖို့တောင် မနည်းခေါ်ယူရတယ်။
သူမှာ ချစ်ရမယ့်သူလည်း ရှိရင်ရှိမှာပါ။
သူအကိုက်ခံရရင်၊ အနိုင်ကျင့်ခံရရင်လည်း လျှောက်လည်ရာကနေ အိမ်ကိုပြန်ပြေးလာတတ်တယ်။
သူငယ်ငယ်က အလည်လွန်ပြီး ခဏခဏ ပျောက်တတ်တယ်။
အဲလိုအချိန်ဆို ကျွန်တော်တို့မိသားစုတင်မကဘူး အိမ်နီးချင်းတွေပါ အငြိမ်မနေရ။ အားလုံးသူ့ကိုလိုက်ရှာကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘဝတူတွေနဲ့ယှဉ်ရင် သူကံကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော့်မိသားစုနဲ့စတွေ့နဲ့ နေ့ကစပြီး သူအရင်က အရမ်းငတ်တဲ့ မေတ္တာဓာတ်တွေ လွှမ်းခြုံခံလိုက်ရလို့ပေါ့။
ဒါပေမယ့် သူ့အမေကရော သူ့ကိုလွမ်းနေမလား မသိ။
မချုပ်ချယ်ထားသလို သူ့အတွက်ဆို တံခါးလည်းအမြဲဖွင့်ထားတာပေါ့။
သေချာပါတယ် သူကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ ပျော်သလောက်နေမှာပါ။
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 12:00 PM2comments: Links to this post
Intro: (C, D, E)2 C, D, G
CHO; (C, D, E)2
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 9:15 AM No comments: Links to this post
Labels: lyrics, သီချင်း
တစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်…….
တစ်သိန်း၊ နှစ်သိန်း၊ သုံးသိန်း…….
တစ်သန်း၊ နှစ်သန်း၊ သုံးသန်း……
အမှောင်ထဲပို့ ကျားတိုက်ပြီး သတ်စေ
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 10:48 PM2comments: Links to this post
တေးရေး - အရိုး
V1. ဒီနေ့တစ်ရက်အားလို့ သီချင်းရေးမလားစဉ်းစား
V2. ကန်ထရိုက်တိုက်မို့ ဒီလောက်တော့အေးဆေးပါ
၁၅ မိနစ်လောက်အထိ စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
Cho: တော်ပါပြီ စိတ်ကုန်တယ်
အားလုံး အားလုံး အေးဆေး
V3. ငါထွက်သမျှဒေါသ တစ်ဖြေးဖြေးစိတ်လျှော့ချ
V4. ဒီမြို့ပြစရိုက်နဲ့ ကျုပ်နဲ့မကိုက်တော့ပါ
Cho: (တော်ပါပြီ စိတ်ကုန်တယ်
အားလုံး အားလုံး အေးဆေး)၅
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 8:44 AM No comments: Links to this post
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 12:24 AM No comments: Links to this post
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 9:22 PM No comments: Links to this post
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 10:51 AM2comments: Links to this post